Espana " Journey-Assist - Travel. Fialam-boly. Food. fiantsenana Climate. Interesting
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » Espaina
15 Mey 2020
Mihaona amiko! Sunny Spain!
Ny tarehin'i Spain maro
Raha tsotsotra momba an'i Espana
Ny Fanjakan'i Espana dia fanjakana avaratra ao atsimo andrefan'i Eoropa. Mpikambana ao amin'ny vondrona Eropeana sy OTAN.
Miorina amin'ny tany misy firenena dimy:
Gibraltar (Fanjakana anglisy)
Sasao avy amin'ny Ranomasina Mediterane any atsimo sy atsinanana i Espana, ary ny Ranomasimbe Atlantika any andrefana sy avaratra.
Izy io dia iray amin'ireo firenena be tendrombohitra indrindra any Eropa. Ny haavon'ny haavon'ny haavon'ny ranomasina dia 650m. Ary amin'ny lafiny habe dia laharana faha-5 any Eropa i Espana.
Inona no tokony hatao any Espaina
Espana dia manolotra safidy fizahan-tany isan-karazany. Ireo mpitia tora-pasika dia afaka miala sasatra any amin'ny Nosy Balearic sy Canary, amoron'ny Costa Brava, Costa Blanca, Costa Dorada. Mihoatra ny antsasaky ny morontsiraka Espaniôla no faritra fialam-boly misy lanjany lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny morontsiraka Espaniôla dia omena saina manga isan-taona - marika kalitao iraisam-pirenena.
Menorca - Nosy Balearic
Costa Brava. Morontsiraka avaratr'i Catalonia
Costa Blanca. Espaina
Ny olona tia kolontsaina Espana dia mety ho gaga ihany koa
Ho an'ireo izay tia tranombakoka, kolontsaina, tantara, tsangambato, ny fandalinana ny tanàna Espaniola lehibe - Madrid, Barcelona, ​​Granada, Seville, Toledo, sns .. Nandritra ny taonjato maro dia nitana ny toeran'ny ivon-kolontsaina sivilizasiona eropeana i Espana. Ny tanàna lehibe sy ny tanàna kely dia manankarena amin'ny tsangambaton'ny kolontsaina maro: fahizay, celtika, fenisianina, jiosy, arabo.
Madrid - renivohitr'i Espana
Sevilla Fahagagana amin'ny tanàna mahavariana!
Fototry ny fizahan-tany avaratra sy ambanivohitra any Espaina
Ny faritra avaratra amin'ity firenena ity miaraka amin'ny taniny tsy manam-paharoa dia ilaina ho an'ireo izay mahaliana ny fizahan-tany ambanivohitra. Betsaka ny zaridainam-pirenena, tahirin-javaboary, tora-pasika tsy mahazatra, onitra manaitra ary hantsam-bato.
Ary zaridainam-pirenena iray hafa an'ny Espana
Espaniôla dia toerana fitsangantsanganana malaza momba ny gastronomika
Malaza amin'ny fandrahoana azy koa i Espana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy afaka miresaka momba ny nahandro Espaniola ho zavatra tokana ianao. Ahitana sakafo avy amin'ny faritra maro izy io. Ny faritra tsirairay dia samy manana ny tiany. Ohatra, any Valencia dia paella, any Madrid dia cosido madrileño, ary any Galicia dia empanada. Na izany aza, maro ny nahandro isam-paritra no mbola manana ny mampiavaka azy - ny fampiasana legioma, hazan-dranomasina, trondro, menaka oliva. Ny faritra rehetra any Espana koa dia mamokatra divay tena tsara.
Malaza eran-tany ny divay espaniola.
Toetr'andro any Espana
Espanya dia firenena eoropeana atsimo sy marefo izay any amin'ny Mediteraneana ary manana toetr'andro mahazatra ho an'io faritra io. Mafana ny ririnina eto, ary mafana ihany ny fahavaratra. Mandritra izany fotoana izany, any amin'ny trano fandraisam-bahiny sasany, ohatra, any Canaries, ny mari-pana dia saika tsy ambanin'ny +15 mihitsy.
Ny hafanana isan'andro isan'andro any Espaina mandritra ny volana maromaro
Ny hafanan'ny rano ao Espana mandritra ny volana maromaro
Ny orana any Espana isam-bolana
Any an-tendrombohitra, mazava ho azy fa ny toe-javatra iain'izy ireo.
Ririnina any an-tendrombohitr'i Espana
Ny ririnina any Espana dia manomboka amin'ny Desambra ary mifarana amin'ny volana feb. Ny fahavaratra koa dia toy ny amin'ny latitude somary antonony, manomboka amin'ny volana Jona ary mifarana amin'ny Aogositra. Ny fotoana tsara indrindra amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina dia aogositra. Amin'ity volana ity, mafana indrindra ny rano amin'ny morontsirak'i Mediterane, mahatratra +26 eo ho eo.
Weather in Spain now + forecast
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona any Espaina. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.
Fiantsenana any Espaina
Any Espaina, ny distrika miantsena manontolo
Faritra miantsena Espana
Ny fiantsenana any Espana dia traikefa tena mahaliana sy mahafinaritra. Ao amin'ireo tanàn'ity firenena ity dia misy distrika fiantsenana samihafa ahafahanao miantsena, ary mandritra ny fiatoana misotro divay na kafe eny ivelany. Ny toeram-pivarotana akaikin'ny tanàna dia manome tahiry hatramin'ny 80 isan-jato amin'ny akanjo tamin'ny fanangonana tamin'ny taon-dasa.
Iray amin'ireo toerana malaza indrindra any Espana - Coruna (A Coruña)
Inona no mahasoa mividy ao Espaina
Any Espaina, mitombina ny hividianana vokatra roa (jamon, divay, menaka), ary koa kiraro, akanjo, akora. Betsaka ny marika voasoratra anarana izay nahazo laza malaza manerantany, ary ny vidin'ny vokatra azony, na dia tsy misy fihenam-bidy aza, dia somary maivana ihany.
Mitovy amin'ny firenena eropeana rehetra, ny varotra dia atao in-2 isan-taona any Espana: amin'ny ririnina sy amin'ny fahavaratra. Ny varotra ririnina dia antsoina hoe "rebakhas" eto ary manomboka amin'ny andro voalohan'ny volana janoary ka hatramin'ny faran'ny volana martsa.
Rebahas. Ny varotra ririnina any Espaina
Ny fiandohan'ny fivarotana fahavaratra dia latsaka tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana Jolay, ary nifarana izy ireo tamin'ny fiandohan'ny volana septambra. Mandritra izany fotoana izany, any amin'ny faritany sy tanàna samy hafa, ny fotoana fivarotana dia mety ho somary hafa kely ihany.
Vokatra izay azo antoka mividy any Espaina:
Any Espaina dia mahasoa ny mividy divay tsara
Ao Espaina dia mahasoa ny mividy marika akanjo amin'ny laza
Voahangy ho an'ny tsiro rehetra
Any Espaina, fivarotana firavaka lehibe maro be
Makiazy faran'izay tsara amin'ny tsirony sy teti-bola rehetra.
HandMade any Espana
Na eto amin'ity firenena ity aza dia amboarina ny asa tanana sy ny zavakanto. Any amin'ny faritra rehetra dia afaka mahita entana amidy vita an-tanana nataon'ireo mpanao asa tanana any an-toerana ianao:
Catalonia, Toledo sy Valencia no tena malaza amin'ny seramika.
Fangaroana vita amin'ny tanana any Espaina
Salamanca sy Cordoba - firavaka
Firavaka vita tanana
Galicia - dantelina
Mallorca - firavaka voahangy faux
Voahangy malaza eran-tany avy any Mallorca
Ny tsiron'i Espana. Cookery
Tsy mitovy ny sakafo Espaniola. Ahitana nahandro 17 isam-paritra samihafa. Amin'ny ankapobeny dia azo antsoina hoe tsotra izy io. Ny akora ilaina indrindra dia tongolo lay, tongolo, poivra, menaka oliva, anana. Ho an'ny lovia sasantsasany, ny vary dia ampiasaina, ohatra, any amin'ny malaza manerantany paella.
Eto amin'ity firenena ity dia salady no antony anaovan'ny legioma vaovao na masirasira, hazan-dranomasina sy voanjo. Ny menaka oliva sy ny vinaingitra dia ampiasaina ho fanodinana.
Salady tuna nentim-paharazana
Salady espaniola mahazatra
Matetika ny Espaniôla dia mampiasa lasopy - lasopy mameno sy nopotsehina.
Lasopy oliva podrida
Iray amin'ireo lasopy espaniola fahita indrindra ny oglia podrida. Ity lovia ity dia vita amin'ny hena sy legioma.
Lasopy espaniola Olla podrida
Andposiana gazpacho - lasopy malaza any Espana
Ny lasopy malaza indrindra any Espana dia ny Andalusian gazpacho, vita amin'ny voatabia sy legioma hafa miaraka amin'ny menaka oliva, mofo ary rano. Mangatsiaka izy io.
Paella no lovia malaza indrindra any Espana
Angamba ny lovia espaniola malaza indrindra dia paella. Izy io dia misy vary sy karazana additives isan-karazany. Misy fomba fahandro an-jatony hanomanana azy. Ho an'ny paella klasika, ankoatry ny vary dia karazan-dranomasina sy trondro fito no ampiasaina, ary koa akoho, anana, divay fotsy ary, mazava ho azy, zava-manitra. Misy ihany koa safidy azo atao amin'ny paella hena sy legioma (legioma).
Espaniola Jamon (Jamón)
Ny vokatra Espaniôla malaza indrindra, malaza manerantany, dia jamon. Tongolo henan-kisoa sitrana maina. Jamon dia azo antsoina hoe harem-pirenena any Espana. Mba hahazoana ham, ny sira dia asiana sira, maina, maina ao anatin'ny fepetra voafaritra tsara. Ny fanajana mafy ny teknolojia dia ahafahanao mamorona iray amin'ireo sakafo matsiro indrindra eto an-tany. Saika tsy misy kolesterola ao amin'ny jamon. Io no vokatra hena malaza indrindra any Espana.
Mendrika ny fiheverana akaiky an'i Espana amin'ny fitsangatsanganana gastronomika i Espana, ary mpampifandray tora-pasika tsara indrindra na fizarana kolontsaina tsy manam-petra.
Ny toetran'i Espana, ny tendrombohitra, ny Ranomasina Mediterane ary ny Ranomasimbe Atlantika, ny valan-javaboary lehibe, ny tanàna mahafinaritra miaraka amin'ny lalambe mihaona feno hipoka amin'ny rivotra Espana, tsy hamela olona tsy hiraharaha.
Coat of Spain
Fomba fitantanan'ny governemanta: Monarchy momba ny lalàmpanorenana
Kaody finday: 34 +
Sandam-bola: Euro (€ - EUR)
Sehatra Internet: .es
Tsy maintsy mizaha tokoa ianao!
Tsy azo ampitahaina ny tsapan'ny Espaniola!